Fantaro i Emeka Ezeibe, mitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron’ny 17-23 avrily 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2019 6:00 GMT
Mandritra ny taona 2019 ary ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny antserasera, hifandimby ny Afrikana mpikatroka ara-piteny sy ireo mpanandra-teny amin'ny fitantanana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainan'izy ireo amin'ny famelomana indray sy amin'ny fampiroboroboana ny fiteny afrikana. Hiresaka momba an'i Emeka Ezeibe (@Umu_Igbo) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity ny lahatsoratra.
Emeka Ezeibe no anarako ary avy ao amin'ny fanjakana Anambra ao Nizeria aho. Filankevitraamin'ny resaka fitaterana/fampitaovana aho ary miasa amin'ny maha-mpitatitra lehibe ao amin'ny Nigerian Breweries PLC sy ny AB-InBev Nigeria aho amin'izao fotoana izao. Na dia avy tamin'ny fianarana injeniorà aza aho, ny zava-niainako mangidy tamin'ny fahazazako no nahatonga ahy hankamamy amin'ny fampielezana sy ny fikajiana ny fiteny Igbo amin'ny fampiasana ny teknolojia. Mpanorina ny @Umu_Igbo aho, kaonty Twitter izay mitady ny fampîroboroboana ny fiteny, ny kolontsaina, ny fahalavorariana, ny fanavaozana ary ny ohabolana Igbo.